Taariikh Nololeedkii Marxuum Xildhibaan Cumar Xaashi Aadan oo ahaa Wasiirkii Amniga Qaranka Soomaaliyeed
1942, ayuu ku dhashay Degmada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan
1947, wyxyy waxvarasguuduu Barashada Diinta Islaamka ku qaatay isla degmadaasi B/weyne
1949, wuxuu tacliintii Dugsiga Hoose ee Talyaaniga ku soo qaatay Degmada B/weyne
1960-68-kii, wuxu ku biiray ciidanka Booliska Soomaaliyeed, wuxuuna ka soo kala shaqeeyey, Degmooyinka:
Waajid iyo Xudur, xilligaasoo uu ka mid ahaa ciidamada Daraawiishta, wuxuuna ka qeyb galay dagaalkii 1964-tii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya, isagoo helay Derejeda Sarkaal Xigeen, isla markaana wuxuu sii watay tacliintiisii illaa Dugsiga Sare.
1969-kii, wuxuu ku wareegay ciidankii Xogga Dalka Soomaaliyeed, wuxuuna tababaro maamulka lacagta ah ku soo qaatay dalka Talyaaniga.
1970-75-kii, wuxuu ka baxay maamulka lacagta qeybta 26-naad oo uu ku gaaray Derejada Xiddigle.
1976-80-kii, wuxu ahaa madaxa maamulka lacagta Qeybta 26-naad oo uu ku gaaray Derejada DHAMME.
1980-81-kii, wuxuu ka soo sahqeeyey Hay’adda nabadgalyada GAashaandhiga (HANGASH).
1981-84-kii, wuxuu ahaa Guddoomiyaha degmada Qandala ee Gobolka Bari.
1984-86-kii, wuxuu noqday Guddoomiyaha Degmada B/weyne ee Gobolka Hiiraan.
1986-88-kii, waxaa loo magacaabay degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe, wuxuuna qaatay Derejeda Gaashaanle sare.
1988-89-kii, wuxuu noqday guddoomiyaha gobolka Jubbadda dhexe.
1989-91-kii, wuxu ahaa Guddoomiyaha gobolka Bari ee Bosaaso.
1991-kii, markii ay burburtay dowladdii jirtay wuxu isku howlay nabadeynta beelaha Soomaaliyeed, wuxuuna ahaa guddoomiyihii shirweynihii beelaha Hawiye ee ka dhacay Hotelka Guuleed, isla sanadkaa wuxuu noqday shir guddoonkii.
Shirweynihii Dib-u-heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed ee lagu qabtay Dalka Jabuuti, kaasoo lagu soo dhisay dowlad Qaran oo uu madaxweyne ka ahaa mudane Cali Mahdi Maxamed.
1991-2009, wuxuu xildhibaano ka soo kala noqday dowladdii TNG oo uu ka soo ahaa Wasiirka lacagta, TFG iyo tan Midnimada Qaran oo uu ahaa Asiirkii Amniga Qaranka ee dhexa u xirtay sidii uu dalka ugu soo celin lahaa xasilooni iyo kala dambeyn.
Marxuumku wuxuu ifka kaga tagay xaas iyo 42 caruur ah oo isugu j ira wax uu dhalay iyo waxay sii dhaleen, waxaana ILLAAH uga baryeynaa in u naxariistiisa janno ka waraabiyo, ummadda Soomaaliyeed iyo qoysaskii iyo eheladii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan alle ka siiyo.
LIISKA MAS’UULIYIINTII KU EERIYOOTAY MASIIBADII SHALAY KA DHACDAY DEGAMDA BELEDWEYNE
1. xildhibaan Cumar Xaashi Aadan Wasiirkii Amniga Qaranka
2. Ambassador C/kariin Faarax Laqanyo
3. G/le sare Maxamed CAbdi Yarow (Shanle)
4. G/le sare Maxamed Barre Fiidow
5. G/le SAre Cumar Xasan Dhudi (Taliyaha Ciidanka ASlubta G/Hiiraan)
6. Col. Yuusuf Xuseen (Timacadde)
7. Nabadoon Faarax Cabdulle Fiidow
8. Nabadoon Xasan Biriqow
9. Nabadoon Xasan Cilmi Hurre (Dirir)
10. Nabadoon Axmed Carrabey
11. Nabnadoon Cilmi Shire
12. Abwaan Maxamed CAbdi Cibaar
13. Abwaan CAbdi-dhuux Guure CAli
14. GAnacsade Buulle Xaashi Aadan (Wasiirka Walaalkiis)
15. Eng. Cabdifitax Cali Xaydar
Iyo 23 ruux oo isugu jira Saraakiil iyo illaaladii Wasiirka
garaadcadde salaad <garaadcadde@gmail.com>